Maqaal: Hasha labada geed jecel! | Jubbaland Media Online
Maqaal: Hasha labada geed jecel!
Posted on January 23, 2016 in Opinions, Wararka // 5 Comments
Tuulada Ceelcade waxay dhacdaa Jubbaland, gobolka Gedo,waxayna qiyaastii 50 kiloo mitir dhanka koonfurgalbeed ka xigtaa degmada Garbahaarey. Dhanka xuduuda Kenya waxay u jiraa qiyaartii 70 kiiloo mitir.
Sidaan la wada soconno, tuuladaas waxaa 15 kii bishan ka dhacay dagaal dhex maray ciidamada nabad ilaalinta AMISOM iyo kuwa Alshabaab, ka dib markii ciidamada Alshabaab weerar gaadmo ah ku qaadeen saldhig ciidamada AMISOM ku lahaayeen tuuladaas, weerarkaasoo waxyeelo ba’an loogu geystay ciidamada AMISOM.
Hadaba tan iyo inti uu dhacay weerarkaas, waxaa baraha lagu bulsheeyo iyo qaar badan oo ka mid ah warbaahinta Soomaalida laga dareemayay nooc dabaal deg aad mooday, sida in iyaga guul u soo hoyatay, waxayna aad ugu faraxsanaayeen khasaaraha loo geystay ciidamada AMISOM.
Waxuu jawigaas mar keliya isbedelay, ka dib markii isla ciidamadii loo dabaal degayay guushi ay ka soo hoyeen dagaalki Ceelcade weerar la beegsadeen xeebta Liido ee magaalada Muqdisho, dad badanna ku laayeen.
Waxaa halkaas ka cad in qaar badan oo ka mid ah Soomaalida aanay kala garaneynin waxa ay rabaan iyo waxa aysan rabin, waxa ay ku farxayaan iyo waxa ay ka naxayaan, waxa ay danta ugu jirto iyo waxa dantooda ka hor imanaya intaba.
Hasha labada geed jecel, soomaalida dhan ha isu buusto.
5 Comments on Maqaal: Hasha labada geed jecel!
Ina bide hure // January 24, 2016 at 5:53 am // Reply
Kajooga mareexanow mafiicna beeni ama al,shabaab,ama jubalaand,kaladoorta beeni,wayhadha,walee
Ina bide hure // January 24, 2016 at 6:21 am // Reply
Maxan,kabaryayna,mareexaan malaha faaiido hana,kasugin,wanaag
Ina bide hure // January 24, 2016 at 6:28 am // Reply
CAAQIL // January 28, 2016 at 7:13 am // Reply
WAXAY KU FIICNAANLAHAYD INAAD KALIGAA SHEEKAYSATID
MARKAAN FIIRIYAY CAQLIGAAGA
Cabdulaahi // February 2, 2016 at 6:56 pm // Reply
Ruux wax fahmi karaa lala sheekaystaa.caqli xumada kugu jirtaa waa waxaad la kala garan ladahay wixii kuu dana.Cid la baryayo ma jirto.maadaama ilka yar danteeda garan la dahay.